Android အတွက် BBC Good Food APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက်
ဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက် APK ကို
ဤသည်အသုံးပြုသူများကိုဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက်ရဲ့ကျယ်ပြန့်ချက်ပြုတ်နည်းများဒေတာဘေ့စမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငါပေးမည်ဖြစ်သောဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက် app ကို၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Key ကို features တွေပါဝင်သည်:
- ဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက်အသင်းထံမှလတ်ဆတ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်, လမ်းကြောင်းသစ်ဦးဆောင်သောဟင်းလျာများအပါအဝင်န့်အသတ်ဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက်ချက်ပြုတ်နည်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်,
- ချက်ပြုတ်နည်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ကြီးထွားလာရွေးချယ်ရေး browse နှင့်အသစ်သောဟင်းလျာများလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကဆက်ပြောသည်နေကြတယ်
- နောက်ဆုံးပေါ်, လမ်းကြောင်းသစ်ဦးဆောင်တဲ့ဘီဘီစီကောင်းမွန်သောအစားအသောက်ချက်ပြုတ်နည်းများရှာရန်
- သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင် Collection တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကဤချက်ပြုတ်နည်းများ ADD
- သင့်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ Rating
- တဦးတည်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိချက်ပြုတ်နည်းများချွေတာခြင်းနှင့်စည်းရုံးရေး START, အခြားသောအပေါ်ပြန်လည်စတင်
- ACCESS အားလုံးကိုသင့်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် collection များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်
- NEW! အခုဆိုရင်သင်အလွယ်တကူမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်စာရွက် collection များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ဒုက္ခသင့်ရဲ့စိစစ်အတည်ပြုအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိရှိနေပါသလား? သင့်ရဲ့ junk သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်း folder ကိုစစ်ဆေးပါ, သင်နေတုန်းပဲဒါကြောင့်ထို့နောက် goodfoodwebsite@bbc.com အီးမေးလ်ပို့ပါမတှေ့နိုငျနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အက sort ဖို့အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မယ်လျှင်။
26.81 ကို MB
ချက်ချင်းမီဒီယာ Co. ,